4Share ဆိုဒ်မှဒေါင်းနည်း ~ အပေါင်သား
Mozill နဲ့ Internetမြန်အောင်
Internet Error code အကြောင်း
Web Page Loading မြန်အောင်
Google Chrome Double Views
FaceBook Mailများ Gmail ထဲဝင်လတာ မလိုပါက
Gmail အကောင့် သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်ရန်
Mail Password Hacking
GMAIL/TALK ACCOUT မကျန်စေဖို့နည်း
GTALK SHORTCUT KEYသုံးနည်း
Facebook VDO Chat
Window7Personalozeပြသနာ
Android ဖုန်းတွေမှာ Rootလုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
Hard Disk Error ဖြေရှင်းနည်း
Auto ShutDown လုပ်နည်း
Fruity Loop studio10(သံစဉ်တီးသူများအတွက်)
Ulead Video Studio6(မြန်မာလို)
Adobe Premiere ဖြင့် Video တည်းဖြတ်နည်း (မြန်မာလို)
Autocad 2010 အသုံးပြုနည်း ၁(မြန်မာလို)
Learning Web Design(မြန်မာလို)
Corel Draw x4ဖြင့်ဖန်တည်းခြင်းနည်းပညာ
Adobe Photo Shop CS4 (မြန်မာလို)
Window7အသုံးပြုနည်း
Windows Vista တင်နည်း
Windows XP တင်နည်း
Microsoft Visual BAsic 6.0(မြန်မာလို)
ရိုးသားစွာ ဖောက်ထွင်းလေ့လာခြင်း HACKING
A+ PC Hardware(မြန်မာလို)
Advanced Digital Photography(မြန်မာလို)ဓါတ်ပုံသမားများအတွက်
http://adf.ly မှ ဒေါင်းနည်း
Utorrent File တွေကို ဒေါင်းနည်း
RapidShare မှ ဒေါင်းနည်း
File size 100 အထက်ဖိုင်တွေကို Upload တင်နည်း
Zshare ဆိုဒ်မှ ဒေါင်းနည်း
Bugyi No comments
4shared ဟာလဲ ဖိုင်တွေကို share ပေးဖို့အတွက် download ထုတ်ပေးတဲ့ file hosting ဆိုက်တစ်ခုပါပဲ .. သူနဲ့ဘယ်လို download လုပ်မလဲဆိုရင် အောက်မှာပုံနှင့်ပြထားပါတယ် .. တတိယအဆင့်ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ download
လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် .
Posted in: Download လုပ်နည်းများ
Click on image for Down
ဒီ blog လေးကိုလုပ်တာကတော့ ကျနော်တို့တွေ ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေ ရှိတဲ့အချိန်ကျရင် အလွယ်တကူပြန်ရှာနိုင်အောင် နဲ့ လိုအပ်မယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်ဝေမျှနိုင်အောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ...ဒီ blog လေးမှာကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် တင်ထားတာတွေရှိသလို အခြားနေရာများမှ ပြန်လည်ကူးယူတင်ပေးထားတာလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်... လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော member ၀င်ပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေလို့ ကျနော်တို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...... သူငယ်ချင်းတို့ပေးသွားတဲ့ comment က ကျနော်တို့အတွက် အားဆေးတခွက်ပါဗျာ... ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုလ့် အများစုကိုတော့ ကျွန်တော့်အကိုကြီး ကိုညီနေမင်း ဆိုဒ် ကို အများဆုံး အထောက်အကူ ပြုပြီး ပြန်လည် မျှဝေ ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဒီနည်းလေးကို ကျွန်တော့် အကိုကြီး ကိုညီနေမင်း ဆိုဒ်မှ ပြန်လည် ကူးယူ မျှဝေတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည် သယ်ရင်းတို့အဆင်ပြေတဲ့ လင့် ကနေပြီးတော့ ဒေါင်းယူ သင်ကြား နိုင်ရန်အတွက် မျှဝေလိုက် ခြင်းဖြစ်ပါသည်........ အပေါင်သား
အ.ထ.က(ပေါင်) FaceBook Like Page မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို ပါသည်..... ဒါကို အဝေးရောက်နေတဲ့ ပေါင်မြို့နယ်သူ၊ နယ်သားများ ကိုပြန်လည်ဆုံဆည်းစေရန် နှင့် နည်းပညာ ။ Software / ဗဟုသုတ များကြွယ်ဝစေရန် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အောင်မျိုး မှ ကူညီရေးထားပေးသော Page ဖြစ်ပါသည်။ အ.ထ.က(ပေါင်) ခေါင်းစဉ် ဘေးမှ Like Icon လေးကိုကလစ်ပေခြင်း ဖြင့် ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ပါသည် . ... . . . . . . . .. မှတ်ချက် ။ ။ မိမိရရှိထားသော ဆော့ဝဲ ။ နည်းပညာ ။ ဗဟုသုတ ။ အထွေထွေ တို့ကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် မျှဝေ ပေးခဲ့ပါရန် အကူညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။
Adobe Series (11)
Copy Delete (2)
Download လုပ်နည်းများ (10)
fast copy (3)
IOS လေ့ကျင့်ခန်း (1)
Media Softwares (12)
window7genius (7)
window xp spy (4)
မြန်မာ Desing fonts (5)
မြန်မာ E.BOOK များ (16)
Copyright © 2011 အပေါင်သား | Powered by Blogger